Jabuuti oo la wareegtay saamigii shirkadda DP-World ay ku laheyd dekedda Dooraale - Halbeeg News
Jabuuti oo la wareegtay saamigii shirkadda DP-World ay ku laheyd dekedda Dooraale
JABUUTI (HALBEEG) Dowladda Jabuuti ayaa warsaxafadeed ay soo saartay ku sheegtay in guud ahaan saamigii shirkadda DP-World ku laheyd dekedda Dooraale ee Jabuuti ay la wareegtay dowladda islamarkana la qarameeyay.
“Iyada oo laga duulayo go’aanka ay horay madaxtooyada Jabuuti uga soo saartay iney gabi ahaanba maamulka iyo maareynta Dekedda Dooraale kala wareegtay maamulka Shirkadda PDSR ee maareynta dekedda gacanta ku haysay, dowladda Jabuuti ayaa waxay si cad u xaqiijisay iney DP World ay dib ugu soo laaban karin maamulka Dekadda.
Dowladda Jabuuti ayaa xustay in hadda maamulka iyo mareynta dekedda Dooraale lagu wareejiyay, shirkad maxali ah oo lagu magacaabo SJTD.
Warqadkan ay soo saartay xukuumadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in shirkadda DP World oo mar kale Jabuuti ku soo laabata iney ka dhigan tahay in mar kale fursad loo siiyo inay mucaaraddo dowlad madax bannaan.
Xukuumadda Jabuuti ayaa sheegtay in shirkada DP-World ay caqabad ku aheyd horumarka dalka Jabuuti.
Shirkadda DP World ayaa war saxafadeed ay soo saartay 5-tii bishan September ku sheegtay iney maxkamad ku taalla dalka Ingiriiska u xukuntay maamulka iyo maareynta dekedda Dooraale ee Jabuuti iney ku soo noqoto.
Dowladda Jabuuti ayaa 22-ka bishii Febraayo ee sanadkan 2018-ka si rasmi ah shaqada uga joojisay shirkada DP World, iyada oo maamulka dekadda Dooraale gacanta ku haysay tan iyo 2006-dii.
Dekadda Dooraale ayaa ah isha ugu badan ee dhaqaalaha ka so galo xukuumadda Jabuuti, islamarkana ay fursado shaqo ka helaan dhalinyaradda.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka oo la kulmay safiirka Turkiga ee Soomaaliy
Ciidamada booliska Soomaaliya oo toogtay sarkaal ka tirsanaa Al shabaab